N'ime ụbọchị atọ naanị anyị ga - amata Meizu 17 | Gam akporosis
Kemgbe ọnwa gara aga, anyị nọ na-atụ anya ihe omume nke a ga-ewepụta ma mepụta nke Meizu flagship smartphone ọzọ, nke na-abụghị onye ọzọ karịa Meizu 17.
Igwe arụmọrụ a dị elu anọwo ekwenye na a ga-ahapụ ya na Eprel, nke bụ ọnwa a. Otú ọ dị, ekpughebeghị ụbọchị a ga-ewepụta ha. N'agbanyeghị nke a, asịrị ahụ emebeghị ka ọ chere nke abụọ ma chọta ya na njedebe nke ọnwa, mana nke a bụ obi abụọ ugbu a n'ihi na ozi kachasị nso nso a na-egosi na Eprel 17 na-esote bụ ụbọchị akwadoro nke anyị ga-abụ na-anabata nke a mobile ọhụrụ na Qualcomm si Snapdragon 865.
Otú ahụ ka ọ dị. Dị ka anyị kwuru na aha isiokwu a, n’ime nanị ụbọchị atọ ka Meizu 17 ga-amalite ọrụ, mobile nke ga-enwe njirimara kachasị elu na nkọwa ga-eme ka ọ bụrụ otu n'ime smartphones kachasị mma na nke kachasị ike nke afọ a site na oge efu nke ọrụ ya, na-enweghị mgbagha. [Choputa: Nke a bụ Meizu 17, na-esote elu-akara nke ika]
Meizu 17 igba egbe ọkwa
Ọ bụ 100% n'aka na na Eprel 17 Meizu ga-eweta ngwaọrụ ọhụrụ, ma ọ bụghị na ọ bụ Meizu 17. Onye na-emepụta China na nso nso a gara Weibo iji bipụta akwụkwọ mmado anyị kwụgidere n'elu, nke ọ na-akpọsa ihe ọhụụ, mana na-enyeghị nkọwa ndị ọzọ.
Mgbe ị na-echere ọkọlọtọ ọzọ nke ika ahụ, o yikarịrị ka ọ ga-abụ nke a, na karịa mgbe ọ bara uru ijide ihe omume niile ma ọ bụ lekwasịrị anya na ihe akpọrọ aha karịa ngosi abụọ na erughị izu abụọ tupu ọnwa ebido. A sị ka e kwuwe, a kwadororịrị ngwaọrụ ahụ maka ọnwa a, na ihe na-egosi na ọbịbịa ya maka Fraịde bụ nọmba 17 akọwapụtara nke ọma na ihe nkwado, nke na-eme ka mpempe akwụkwọ ahụ kwekọọ. Mkpakọrịta nke ụlọ ọrụ ahụ na ụdị ọnụọgụ a gosipụtara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Naanị ụbọchị atọ ka anyị ga-amata Meizu 17
Google na-anwale foto HDR maka Igwefoto Go na ekwentị gam akporo ya